छोटो अायुको सरकारमा को बन्ला गृहमन्त्री ? गच्छदारले गृह मन्त्रालय पाउलान त ? – Halkaro
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले राजिनामा दिइसकेका छन् ।
निर्वाचनको मुखैमा गृहमन्त्रीले राजिनामा दिँदै गर्दा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलार्इ दिने भन्ने विषयमा काँग्रेस भित्र चर्चा चलेको छ । कांग्रेस उच्च स्रोतकाअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर निधिले धोका दिएको भन्दै गृह मन्त्रीमा तत्काल पार्टीबाट कसैलाई पठाउने कि राज्यमन्त्रीलाई नै काम चलाउ दिने भन्ने बारेमा छलफल थालेका छन् । गृह राज्यमन्त्रीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ रहेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले अहिले राज्य मन्त्रीलाई नै जिम्मा दिन पार्टीमा केही नेताले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारलार्इ समर्थन दिएर पनि सरकारमा सहभागि नभएको विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले गृह दिए सरकारमा सहभागि हुने प्रस्ताव राखेको छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अायु छोटो भएकोले उनलार्इ ल्याउने की नल्याउने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन् ।
यद्पी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको र संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा गच्छदारलार्इ साथ नलिए प्रचण्ड सरकार धरापमा त छ नै अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि धरापमा छ । गच्छदारले साथ नदिए देउवा प्रधानमन्त्री बन्न कठिन हुन सक्छ ।
त्यसैले पनि उनलार्इ सरकारमा ल्याउने विषयमा काँग्रेस सकरात्मक छ । तर गृह मन्त्रालय चाँही अाफैले राख्नुपर्ने काँग्रेस नेताहरूले देउवालार्इ सुझाव दिएका छन् ।
यता गृहमन्त्री क्याविनेटमै रहेका मन्त्रीहरू मध्ये एकलार्इ जिम्मा दिने विषयमा समेत छलफल चलेको छ। यस्तोमा प्राथमिकतामा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण छन् । त्यस्तै दोस्रो नम्मवरमा रमेश लेखक छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेस सभापति देउवालार्इ गृहमन्त्रालयको जिम्म कसलार्इ दिने भन्ने टुंगो लगाउन अाग्रह गरिसकेको स्रोत बताउँछ । निर्वाचनको मुखमा गृहमन्त्रालय मन्त्रीविहिन हूँदा शान्ति सुरक्षामा असर पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठम्याइ छ । त्यस्तैले पनि गृहमन्त्री तोक्न देउवालार्इ प्रचण्डले अाग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
← अाज देखि निर्वाचन अाचारसंहिता अनुगमन हुँदैः कसले कहाँ कसलार्इ अनुगमन गर्ने ?
धुनीबेसी नगरपालिकाकी वडा सदस्यकी उम्मेदवार मृत फेला →